Wararka Maanta: Arbaco, Dec 26, 2012-Warbixin ku saabsan Tirada Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Sannadkan 2012 lagu dilay dalka Koonfur Afrika
12-kii Abriil, ayaa waxaa ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magaaabi jiray Salaad Xuseen Ganey lagu dilay deegaanka West Bank oo ka tirsan magaalada Cape Town.
18-kii Juun, waxaa la dilay ganacsade Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray C/llaahi Jiin Gudbaaye xili uu ku sugnaa dukaankiisa oo ku yaalla tuulada Phillipi ee duleedka magaalada Cape Town.
11-kii Oktoobar, waxaa deegaanka isku-raranta ah ee dalka Koonfur Afrika lagu dilay Liibaan oo ahaa gancsade Soomaaliyeed, waxaana dilkiisa loo adeegsaday tooreey ama billaawe iyadoo qoorta laga gooyay, waxaana falkan uu dhacay xilli habeen ah.
12-kii Oktoobar, burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa ku dilay tuulada Khaliija ee duleedka magaalada Cape Town ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Canshuur kaddib markii ay ka waayeen lacago ay rabeen inay ka dhacaan dukaaniisa.
Dhanka kale, waxaa jiray dukaamo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed oo kooxo burcad ah ay u geysteen boob, kuwaasoo ku yaalla tuulooyin ka durugsan goobaha magaalooyinka ah ee waaweyn.
Waxaa soo diray: Cumar Kiyoow,
Cape Town, Koofur Afrika